Kordhinta Dhalada - Delta Engineering Belgium
Kariifka qaybta "Kordhinta Dhalada"
Jimcaha, 09 Noofambar 2018 by Cristina Maria Sunea
Hagayaasha dhinaca hagaajin karo - si toos ah ama gacanta lagu hagaajin karo
Nidaam lagu hagaajiyo hagayaasha dhinaca. Si weyn u yareyn kartaa waqtiyada beddelka ee khadadka gudbinta! Noocyo kala duwan oo la heli karo: otomaatig ah (servo-control) - buug gacmeed ku leh gacanta - buuga leh xawaaraha xawaaraha - buuga buuxa.
Published in Xarkaha Dhinac
Xaragada gudbinta - 83mm ballaaran
Waxaan haynaa noocyo kala duwan oo silsilado-qaadayaal ah oo cabbirro kala duwan leh, qalab iyo noocyo silsilad ah: Tusaale ahaan, silsilado yaryar ama faaruq ah oo loogu talagalay dhalooyinka aan degganeyn, iyadoo laga fogaanayo dhalooyinka dhacay!
Xaragada gudbinta - 254mm ballaaran
Waxaan leenahay xirmooyin suuf ah oo dhammeystiran oo la heli karo.
Published in Suunka Flat
Qalabka wareejinta dhinacyada
Wareegtada gacan-ku-haynta ah waxay xambaarsan tahay dhalooyinka beenta ah, waxay dhalooyinka ka kala wareejineysaa mid kale oo kale, waxay ka ilaalinaysaa dhalooyinka in lagu riixo,… Baaritaanka saldhigga iwm.
Weelasha suunka suunka
Xirmooyinka suumanka fidsan ee dhererkoodu yahay 200mm ballaaran ayaa sidoo kale lagu heli karaa vacuum.